SURFSKATING | 10 waxyaalood oo ay tahay inaad ka ogaato Surfskate - THE INDIAN FACE
Xorriyaddu waa mid ka mid ah sababaha aadamaha ee aadka loo raadinayo waxaana jira ciyaaro qaar oo kugu soo dhoweynaya dareenkaas. Tani waa kiiska hawada, taas oo naga dhigaysa xiriir toos ah badda iyo dabeecadda ama maqnaanshaha badweynta, muraayadda, nooca waddada.
Labada isboorti waxay u baahan yihiin tababar iyo farsamo fara badan. Xaqiiqdii, mid ka mid ah hababka ugu wanaagsan ee loo sameeyo waa iyada oo lagu celceliyo qaababka dhaqdhaqaaqa, si si tartiib tartiib ah madaxa loogu dhexgalo.
Qoraalkeena maanta waxaan kaala hadli doonnaa isboortigaan oo ku dhashay sidii loo taageeri lahaa duufaanta, laakiin inyar yar oo ka mid ah ayaa noqda kaabistiisa. Surfskate-ka. Ha moogaan!
1. WAA MAXAY SURFURKU: MACNAHIISA DHAWRKA AH iyo bilowgiisa
Si aan uga hadalno shaashadda dusha sare marka hore waa inaan ka hadalnaa dabaasha. Ballaarinta Spain waa mid "cusub" (dhawr iyo toban sano ka hor) waxayna kordheysay culeys sannadihii la soo dhaafay. Dhaqankooda si weyn ayaa loo dimoqraadiyey, caqabadaha galmada waa la jabiyey iyo jiritaanka iskuulada dusha sare ayaa si aad ah ugu fiday. Dulku waxay la kulmeysaa kor u kac balaaran oo ah safarka raadinta mowjadaha ugu fiican wuxuu noqday meel caadi ah iyo magacyada Slater y MacNamara waxay ku sii kordhayaan sheekooyinka cayaaraha. Iyadoo la raacayo dhaqankan gaarka ah, ee noo xaddidaya ku noolaanshaha badda agteeda, baahida loo qabo in loo ekeysiiyo dhaqdhaqaaqyada aan sameyno markii dabaasha la dhalanay, iyo inaan dareemo waxa aan dareemeyno markaan fuulno hirarka oo aan ku raaxeysanno orodka adrenaline. Baahidaan horay ayaa loo daboolay waxayna leedahay magac: Surfskate.
Laakiin maxay dhab ahaan tahay Surfskate? Waa skate kuu oggolaaneysa inaad si ficil ahaan ah u hesho dareen la mid ah kuwa fuulista oo ay ugu mahad celinayaan usheeda dhexe gaar ah. Qalabkani waa mid aad waxtar ugu leh tababarka dhaqdhaqaaqyada duufaanka qalalan, maxaa yeelay mararka qaarkood biyaha way adag tahay in farsamada la dhammaystiro. Cirbadaha ugu horreeya ee loo yaqaan 'surfskate skate' ayaa soo ifbaxaya markii laba ka mid ah kuwa Kalifoorniyaanka ah iyo kuwa barafka ku duula, David Colley iyo Brad Gerlach, ay seegeen ku tababbarashada dhaqdhaqaaqooda sabuuradda maalmaha aan hirarka lahayn. Si kastaba ha noqotee, waxay ahayd 1996 markii shaashadda 'skskate' ay ka noqotay fikrad aan caddayn runta oo ay u mahadcelinayaan Neil Carver iyo Greg Falk oo ku sugnaa magaalada Venice (California), iyada oo la alifay aalad kacaan ah iyo patent-keedii xigay, sidaasna lagu aasaasay astaanta ugu caansan maanta. maanta adduunka badweynta: Tabeelaha Carverskate.
2. Kani waa qaab dhismeedka duurjoogta! QAYB UQAYB QAYB
Hawada iyo ku faafintu waxay mar kale si aan dhammaad lahayn isugu xiran yihiin; Sabuuradda, oo sidoo kale loo yaqaan loox ama sagxad, qaybta ugu weyn ee dusha sare ee silsiladaha iyo giraangiraha ku dhegan yihiin, waxay la mid yihiin sabuuradda, oo sida tan oo kale, qaybta hore ayaa loo yaqaan sanka iyo xagga dambe, daboolka. Looxdan waxaa loo isticmaalaa maxaa yeelay looma baahna in lagu riixo cagta si loo dhaqaajiyo ama loo soo saaro xawaare. Guud ahaan, waa looxyo u dhexeeya 6 iyo 7 gogol oo alwaax adag ah, oo wata dabacsanaan yar iyo fursad aad u yar oo jaban. In skate dhaqameed aad u badan el daboolka sida sanka Way ka yara sarreeyaan, si kastaba ha noqotee, dusha sare ee badhida dabada ayaa badanaa kor loo qaadaa, in kasta oo aysan u baahnayn inay sidoo kale noqoto
Waa faasaska farqiga keenaya oo noo soo dhoweynaya dareenkaas ku dul duula biyaha badda ama ku wareegaya gidaarradeeda. Wareegga hore wuxuu leeyahay nidaam kuu oggolaanaya inaad laba laab ka dhigto dariiq dhexaad caadi ah oo ay ugu wacan tahay ilo, xagal ka duwan iyo taxane khaas ah oo gaar ah. Wareegga hore wuxuu noo oggolaanayaa inaan sameyno dhaqdhaqaaqyo aad ula mid ah duufaanka. Dhaqdhaqaaqa leex leexashada ee dhidibka dusha sare wuxuu kuu oggolaanayaa leexasho gaaban oo la dhaqaajin karo sida haddii ay tahay hirarka hirarka mowjadaha, oo kugu kallifaya inaad tarmato dhaqdhaqaaqa dabaasha, xitaa haddii aadan taabanin sabuuradda noloshaada.
Qaybta dambe waa dariiq caadi ah, waad ka badbaadin kartaa skateboard-kaaga dhaqameed ama waxaad ku heli kartaa dhib la'aan dukaamada isboorti kasta.
Fogaanta u dhexeysa ulaha iyo miiska.
Waxaa la yaab leh, masaafadan waxaa loo yaqaan magaca giraangirta, in kasta oo adeegsigeedu wax yar ama aan waxba ku lahayn magacan. Aad ayey muhiim u tahay in la ogaado giraangiraha looxyada iyo dhererkiisa, samaynta xulasho wanaagsan oo ah santuuqa ayaa fududahay haddii aad si buuxda u fahamto waxyaabaha ka dambeeya labadan qodob.
Kuwa mas'uulka ka ah, si macquul ah, oo naga caawinaya inaan horay u socono, wax xoqno, siibno. Badanaa waa kuwo dhexdhexaad ah oo aad u jilicsan. Sidan ayaad ku noqon kartaa leexasho u ekeysiinaya dabaasha laakiin ha u oggolaan dariiqa aan qorsheysnayn.
Waxay ku yaalliin dusha sare ee looxyada, waxaa loogu talagalay inay bixiso kala-saarida u dhexeeya fuulitaanka iyo dhulka.
Wareegyada Skateboard ama Surfskate waa labo faraanti oo bir ah oo gudaha ku leh 6, 7 ama 8 kubbo, oo ay ku ilaalinayaan laba cajaladood oo khafiif ah. Badanaa waxay ka samaysan yihiin aluminium. Kabo kasta wuxuu leeyahay 8 wayaan, 2 giraangirkiiba.
3. QIIMAHA AAD KA LEEYIHIIN SURFURKAAGA: QAYB MUHIIM AH OO LAGU SAMEEYO
Nooc kastaa wuxuu leeyahay aaladda gaarka loo leeyahay ee loo yaqaan 'surf skate axle' oo leh nidaamyo kala duwan oo ka soocaya kana soocaya looxyada caadiga ah. Intooda badan faasaskani waa kuwo lagu hagaajin karo adkaanta adeegsiga ama culeysyada kala geddisan iyo inay awoodaan inay ku tababbaraan, kaamil ahaadaan oo aad ka dhigto farsamadaada farsamo ahaan maalmo aan lahayn hirar ama magaalooyin aan lahayn hirar. Si kastaba ha noqotee, summadaha dhidibka, iyo guud ahaan qalabka aaladaha sare, waa heer sare Carver par, taas oo ah sababta marar badan, marka laga hadlayo dariiqyada ama giraangiraha, sumaddan loo isticmaalo. Farqiga weyn ee udhaxeeya shaashadda dusha laga tuuro iyo nooc kasta oo kale oo kabaha iskeetiga ah ayaa ku jira meerisyada. Faasaska sagxadda sare waxay awood u leeyihiin inay ku wareegaan wax ka badan inta caadiga ah labadaba gees iyo geesba verticalmaskaxda. Waxaa jira dhowr nooc oo dhidibka ah, mid walbana wuxuu daboolayaa baahiyo farsamo oo gaar ah; Waxaan hoos kaagala hadli doonaa waxyaabaha aadka loo dalbado:
Carver C7 tiirarka hore: Waa dhidibka 'skskate skate' oo bixiya leexashada ugu fiican iyo bamka ugu dhaqsiyaha badan. Muuqaalkeedu aad buu uga duwan yahay dhaqanka dheer ama dariiq dhexaad ah, wuxuu leeyahay nidaam gacan wareejin ah oo wareegaaya kuna biiraya dhexda dhexdeeda iyo lowska hagaajinta oo la beddeli karo si loo siiyo qalafsanaan dheeraad ah ama ka yar oo u dhiganta, sidaas awgeedna keenta rogasho weyn maroojin C7 wuxuu soo saaraa hawo siman, dabacsan oo qulqulaya, taas oo u eg hareeraha mowjadaha oo leh nooc weyn oo dusha sare ah sabuurad ama miis hal fin hal keel, oo ku habboon sawirka xariiqda iyo qaabka shaqada.
Carver's CX Axle: Qalabkan xardhan wuxuu soo bandhigayaa muuqaal muuqaal ah oo kudhowaad la mid ah dhidibka dhaqameed, in kasta oo uu qabanayo dhammaan howlaha C7. CX ma laha gu 'gu' gudaha ah, waxaa loogu talagalay inuu dhakhso u socdo, Kuwa wadayaasha ah ee doonaya xawaaraha iyo jawaabta ugu badan. Waa dariiq aad u firfircoon oo ba'an, kaas oo ku siinaya suurtagalnimada sameynta leexasho iyo gooyn deg deg ah, iyo dhaqdhaqaaqyo kedis ah.
Waxaad helaysaa dareen la mid ah fuulida sagxadda dusha sare ee saddex-finanka ah.
4. KURBAHA: KALA DUWAN FURAHA KALE
Sida giraangiraha, waxaa lagu qeexay cabbirro kala duwan iyo adkaansho kala duwan. Cabirka waxaa lagu qeexay milimitir. Giraangiraha waaweyn waxay bixiyaan xasilooni dheeri ah waana ka dhaqso badan yihiin, wayna weyn yihiin, iyaguna way jilicsan yihiin. Giraangiraha waaweyn ayaa kufiican barashada baqdinta dhaqdhaqaaqyada taraafikada iyo raacid dheer. Lugaha yar yar ee adag way u fiican yihiin isticmaalka skatepark iyo jaakadaha lagu boodayo. Durometer-ka giraangiraha ayaa cabiraya adkaanshihiisa, kaas oo lagu kala saaray xarafka A waana tixraac loogu talagalay iska caabbinta giraangiraha ee xoqida ama gelida walxaha fiiqan. Markay tiradu sii badato, ayaa shaaggu sii adkaanayaa.
Waxaa jira dhowr nooc oo giraangiro ah oo kuxiran baahiyaha iyo qaabka dabaasha:
Geeska square: Waxay bixiyaan xajin wanaagsan, xasillooni iyo barkimo. Loogu talagalay in lagu maneysto leexashada ballaaran Waxaa lagugula talinayaa inaad ku isticmaasho raacid dheer.
Dusha sare: Adhesion iyo xajin ka badan kuwa afarta gees leh. Waxay bixiyaan xasilooni badan. Loogu talagalay in lagu tababaro leexashada nooc kasta. Oo waliba lagula taliyay safarro dhaadheer.
Gees gogol leh: Waxay kor u qaadaan barkinta, xawaaraha iyo barafka. Waxaa lagugula talinayaa safar gaaban.
Wareeg wareeg ah: Waxay bixiyaan adkaysi iyo iska caabin. Loogu talagalay boodboodka Ku isticmaal Skateparks.
5. WAXYAABAHA AAD KU HAYSAN TAHAY IN AAD KU DOORATO SURFURKAAGA
Doorashada miiska saxda ah maahan hawl aad u adag haddii aad taqaanno sida looga jawaabo su'aalahan:
Dhererkaaga iyo miisaankaaga
Xuduudahaani waxay laxiriiraan cadaadiska aan saarnay cidhifyada miiska iyo halka ay taagan tahay (kala-goynta cagaha miiska). Waxaa aad muhiim u ah inaad fiiro gaar ah u yeelatid dhererkaaga, dhererka aad tahay, looxyada dhaadheer waxay u baahan doonaan inay yareeyaan xasillooni darrada, laakiin maanka ku hay in guddiga oo sii yaraanaya, markasta oo ay sii kordhaan ay sameyn doonaan isla markaana sii adkeyn doonaan waxay la mid noqon doonaan a miiska dabaasha.
Heerkulkaaga sare iyo looxyada aad biyaha ku dhex isticmaasho
Haddii aad horeyba u ahayd taageere skateboard ama fuula, waxaad dooran kartaa noocyo kala duwan oo skaska skaterka ah. Waxaad dooran kartaa guddi yar oo u dhigma dhererkaaga si aad uga dhigto mid qarxa oo firfircoon oo leh wareegyo adag. Sariibad kasta oo aad guriga ku haysato waxay yeelan doontaa santuuqa dusha sare leh oo leh dabeecad la mid ah asfalt-ka. Haddii, dhinaca kale, aad rabto inaad ka bilowdo adduunka shaashadda, waa inaad doorataa looxyo waaweyn, kuwaas oo kuu oggolaanaya inaad sameyso leexdo ballaadhan oo koontaroolaya waxayna ku siin doontaa xasillooni dheeri ah.
Qaabkaaga dabaasha iyo xagee u isticmaali doontaa shaashaddaada
Ugu dambeyntiina, qaabkaaga dabaasha ayaa go'aaminaya nooca looxyada iyo fiilooyinka aad isticmaali doontid: Haddii aad jeceshahay inaad ku dhex wareegto magaalada, waxaad dooran kartaa dhidibka C7 ee aan horay u soo sheegnay oo la mid ah in lagu dul maro hal fin biyo. Mashiinkaan sidoo kale waa lagugula talinayaa haddii aad biyaha ku dhex isticmaasho longboards. Haddii aad si dhakhso leh ugu dhaqaaqdo dhaqdhaqaaq xagjir ah, ka dibna fiilooyin sida CX ah ayaa kugu habboon. Ka fikir qaabkaaga biyaha; hadaad jeceshahay duufaan waxqabadka sare, mataan fin gaaban oo leh mug loogu talagalay mowjadaha yaryar, ama haddii aad doorbideyso guddi loo isticmaalo skatepark. Waxaa jira ikhtiyaarro aan dhammaad lahayn, iyo kahor intaadan dooran santuuqaaga, ka feker midka aad wax badan ka faa'iidi doonto iyadoo kuxiran qaabkaaga iyo farsamadaada.
Sidoo kale xisaabta ku darso meesha aad u isticmaaleyso shaashaddaada shaashadda, haddii aad rabto inay ku tababbarto dabaasha weel, haddii aad aadeyso wadada ama aad geli doontid skatepark. Ka fikir nooca dhulka iyo dhulka aad u guureyso.Haddii aad horey u soo baratay barafka ama dheer, oo aad rabto inaad sameyso safarro gaagaaban, waxaad dooran kartaa looxyo yaryar. Haddii aad rabto inaad sameyso raacid dheer oo aad ku raaxeysato wadada, looxyo dhaadheer oo leh shaashado caan ah iyo giraangiraha waaweyn ayaa ugu fiican.
6. TAARIIKH YAR… ASALKA SURFSKATE: QAADASHADA KAARSIGA
Sidii aan hore u soo sheegnay, Carver wuxuu ahaa kii ugu horreeyay, kan ugu caansan uguna caansan adduunka ee naqshadeynta iyo qaybinta muraayadaha dusha sare.
Waxay u noqotay wax ka badan uun astaan ​​isboorti maxaa yeelay, taariikh ahaan markaan ka hadalno, waxay noqotay horseed iyo qayb muhiim u ah dhalashadeeda.
Astaantu waxay suuqa ku jirtay in ka badan 20 sano waxayna isu muujisay inay tahay hogaamiye waaxda guud ahaanna, skaters-ku way ku kalsoon yihiin markay dooranayaan biraha, giraangiraha iyo looxyadooda.
Waa sumcadda aasaasiga ah ee dhisaysa looxyada dusha sare laga buuxiyo; Waxay kuu oggolaanayaan inaad ku dhex wareejiso jidadka, jidadka la maro, fijaannada ... sida haddii aad ku dhex jirtay biyaha, mawjad aan dhammaanayn.
Carver wuxuu maal galiyaa xirfadlayaal waaweyn Taylor Knox, Yago Dora, Courtney Conlogue, JM Cabrera ama Axi Muniain.
7. SURFURBURKA UGU FIICAN OO AAD dooran kartid
Maxay yihiin qaar ka mid ah kuwa ugu fiican skirifka adag?
Marka lagu daro Carver, waxaa jira noocyo dhowr ah oo ah muraayado dusha sare ka sameysmaya oo helay sumcad badan sanadihii la soo dhaafay oo bixiya tayo la mid ah astaanta hoggaamineed ee suuqa. Kuwani waa qaar ka mid ah kuwa ugu iibsiga badan ee lagula taliyay, adigu dooro!
Xiddig siman: Astaantan Australiyaanka ahi waxay isu taagtay inay tahay mid ka mid ah kuwa ugu fiican suuqa. Kooxdiisu waxay abuurtay nidaam si looxdu ula jaanqaado dhererka, culeyska iyo qaabka rooka ee fuushan. Skates waxaa loogu talagalay oo loogu talagalay ruugga. Safiiradeeda waxaa kamid ah Filipe
Toledo: Smoothstar waxay bixisaa dhidib aad u xasaasi ah, oo guga lagu daro, sidoo kale la hagaajin karo iyadoo kuxiran qofka fuushan. Waxaan wajaheynaa shaashad aad u farsamo iyo gaar ah oo maareynaysa si loogu ekeysiiyo inaan ku jirno darbiga mowjadda. Waa guddi loo yaqaan 'surfers' kuwaas oo raadinaya qallooc dheeri ah iyo xasaasiyad ka jirta meel yar, taas oo u oggolaanaysa tababbarka xayndaab yar. Moodooyinka ugu caansan ee summaddan ayaa ah kuwa loo yaqaan 'Filipe Toledo' (HOLY Y 77) iyo kan Johanne Defay.
Yow:Iyada oo ku saleysan waddanka Basque, summaddani waxay suuqa ku jirtay in ka badan 15 sano waxayna noqotay halbeeg laga barto adduunyada looxyada dhaadheer iyo isboortiga. Looxyadeeda waxaa laga sameeyey alwaax Khariidad waxayna leeyihiin dhidib xasaasi ah oo xakameyn kara. Calaamaduhu waxay leeyihiin laba nooc oo ah adkaanta usheeda dhexe. Yow wuxuu soo bandhigaa shaashad dusha sare laga sameeyay oo laga sameeyay Spain, si dhakhso leh oo awood u leh inuu la tartamo noocyada waaweyn ee suuqa. Safiirka ugu caansan ee kooxda taraafikada YOW ayaa ah Aritz Aramburu.
SwellTech Surfskate: Waa astaan ​​da 'yar oo Mareykan ah oo Jamie O'Brien uu yahay danjiraha weyn ee caanka ah. SwellTech waxay bixisaa wax soo saar ku habboon si loo hagaajiyo farsamada iyo dareenka, waa mid ka mid ah noocyada gudbiya dareenka ugu duulaya. Waxay bixisaa dhidibka u oggolaanaya wareegga 360º. Kabaha istiraatiijiyadda ayaa u dhow farsamayaqaan hareeraha ah marka loo eego dhidibka dhaqanka.
Surf Skate MillerAstaantan 'Cantabrian', oo ku taal inta u dhexeysa buuraha barafka leh iyo keydka ugu horreeya ee loo yaqaan 'Surf' ee ku yaal Spain, ayaa sannado badan soo koraysay. Waxay leeyihiin naqshad aad u qurux badan oo casri ah oo ay ku dhiirrigeliyaan hirarka aan dul marno, barafka aan ka soo degno, muusikada aan dhegeysanno iyo xeebta ama dhaqanka magaalooyinka aan neefsanno, oo ku soo faafay goobta dusha sare ee shaashadda. Qalabkeeda 'lXRKP Surf Truck axle' wuxuu u ekeysiinayaa hawlgalka fiilooyinka CX (Carver Skateboards). Maanta, waxay ku sugan yihiin in ka badan 30 waddan, oo ay ku jiraan inta badan Yurub, Japan, Chile, Imaaraadka Carabta, Kuuriya, iyo kuwo kale.
8. MADRID: MAGAALADA SURFSKATE
Caasimada Isbaanishka waxay leedahay nambar-dhigyo badan. Fursado badan oo kala duwan ayaa ku faafay magaalada oo dhan si ay ugu farxaan skateboarders iyo surfers. Waa kuwan qaar ka mid ah astaamaha loo yaqaan 'skateparks' ee aadan wali ogaan karin:
Madrid Rio: waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna caansan. Waxay ku taal gudaha Beerta Arganzuela, skatepark-kan ayaa ku habboon korjoogsiga. Waxay leedahay fijaano furan oo xiran, diyaarado janjeera, haadyo dhaadheer, godad iyo waxyaabo kaloo badan.
Fagaaraha Tetuán: Waa mid ka mid ah meelaha loo yaqaan 'skateparks' ee ugu caansan magaalada Madrid maadaama ay ahayd mid ka mid ah kuwii ugu horreeyay Spain. Waxay ku habboon tahay kuwa skatater-ka jecel Waddada.
Alcobendas: Waxay ku taalaa xarunta isboortiga degmada ee Valdelafuentes (Alcobendas). Waa la dayactiray, waa mid ka mid ah meelaha loo yaqaan 'skateparks' ee ugu badan Madrid. Waxay leedahay laba barkadood oo qoto dheer oo ku xiran mid seddexaad, taas oo kuu oggolaan doonta inaad ku raaxeysato sariirta dusha sare sida cunugga.
9. IYO BCN MA ISAGA DANBAYO!
Barcelona gudaheeda waxaa ku yaal dhowr skateparks oo tilmaamaya asalka skateboard-ka ee hareeraha iyo dhaq-dhaqaaqayaasha ay ku dadaalayaan inay ku daydaan asfalt-ka looxyadooda:
Arenys de Munt: Waa skatepark-kii ugu horreeyay ee Isbaanish, waxaa la dhisay 1979-kii waxaana goor dhaweyd soo saaray koox ka tirsan skaters. Wali si buuxda looma soo saarin. Waxay leedahay laba fijaan oo qaab-dugsiyeedkii hore oo isku xidhan. Waxay u qaabeysan yihiin sida qeyb nus ah mana laha wax loo yaqaan 'copin'. Intaa waxaa dheer, waxay leeyihiin qoto dheer. Qeyb ka mid ah waa dhul fidsan, oo ku wareegsan hareeraheeda, oo leh qaanso qaanso leh iyo nooc dun ah oo leh gees si loo shiido.
Canyelles Skatepark: Waxay leedahay 3 fijaan. Mid kasta oo ka mid ahi wuxuu leeyahay qoto dheer sida khadadka kala duwan. Midka hore wuxuu leeyahay khadad dagaal badan iyo fidin, skaters-ka horumarsan. Ta labaad waxay leedahay khadad aad u jilicsan, oo loogu talagalay kuwa khibrad yar. Midda saddexaad waxay lamid tahay barkadda qubeyska, oo laba jibbaaran, waxayna leedahay derbi weyn iyo qayb hoose. Intaas waxaa sii dheer, waxay kaloo leedahay aag yar oo waddo ah oo leh haramka, baararka iyo khaanadaha qaabab kala duwan leh.
Badda quruxda badan: Waa baaquli weyn. Albaabka laga soo galo waxaa ku yaal mowjad kuu horseedi doonta fijaannada. Midigta waxaad ka heli doontaa baaquli ka dhib yar, oo hooseeya oo ku habboon bilowga. Bidixda bidix waxaad ka heli doontaa baaquli ugu qoto dheer uguna adag, oo loogu talagalay skaters heer sare ah. Intaas waxaa sii dheer, waxay leedahay aag waddo leh tareenno iyo jaranjarooyin.
10. MA AQOON MAHADSAN TAHAY "HALKAAN HAYSAN YAHAY" HAL HOOSE!
Fikraddan "guryaha dabaasha" ayaa ah qaab arxan darro ah oo lagu baran karo dusha sare ama dusha sare iyo ku booqashada xeebta mowjadaha ugu fiican waqooyiga Spain. Somo waa hudheel ku yaal Castanedo (Ribamontan al mar).
Waxaa soo qabanqaabiyay koox xirfadlayaal ah oo ku xeel dheer cilmiga habeynta wiishka, oo khibrad sannado badan u leh iskuulada ugu fiican degmada.
Marka lagu daro hoyga maalmo yar, aqoonta ay u leeyihiin isboortiga iyo bay'addu waxay u oggolaaneysaa iyaga inay macaamiisha kala taliyaan waaya-aragnimadooda duulimaadka.
Waxay sidoo kale leeyihiin adeeg cashar gaar ah oo cashar ah oo ka caawiya bilowga ama horumarinta isboortiga.
Waxaan kuu sheegnay wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ogaato si aad u ahaato masraxa kore, sidaa darteed haddii aad horay u baafisid laakiin aad rabto inaad kaamil ahaato farsamadaada biyaha, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad ku soo biirto dhaqankan qalalan; Haddii aadan weli ka bilaabin labadan isboorti miiska midkood, maxaad sugaysaa?
Laga soo bilaabo The Indian Face® waxaan dooneynaa inaan kuu sharixno waxa ay dhab ahaan uga dhigan tahay muraayadaha muraayadaha indhaha polarkor loo saaray iyo sidoo kale, waxaan sharraxeynaa faa'iidooyinka noocan ah muraayadaha indhaha polarfuushay oo by
Muddo dheer, qarniyo badan, baddu waxay ahayd halyeeyada weyn ee qabsashadii ulaha. Habka "sahaminta" polar"waxaa bartilmaameed u ahaa tacabiiro badan oo xamaasad leh
Waxaan qabatimnay dabeecadda iyo wax kastoo la xiriira… Waan jecel nahay! Sababtaas awgeed, waxaan dooneynaa inaan kula wadaagno 10 xiisaha aanad ka ogayn waxyaabaha ku saabsan dhagaxyada meeraha ku yaal
The Great Barrier Reef oo ku taal Australia Dhaxalka Adduunka ee Ustaraaliya ee UNESCO, waxay la il daran tahay xoqitaan xoog leh oo ay sababtay kor u kaca heerkulka badda ee soo afjaraya nolosha jilicsan ee l
The Great Barrier Reef waa qaybta ugu weyn ee dhagaxleyda adduunka ee waqooyiga-bari ee Australia, dhulka Queensland. Oo daboolaya in ka badan 340.000 km2, Reef Barrier Great iyo
Koofiyaduhu waxay noqdeen dhar maalinle ah iyo qalab ay isticmaalaan malaayiin dad ah oo adduunka ku nool: muusikiisteyaal, isboorti, cayaartooy ...
Qalab boorsadaada oo qorshee xiisahaaga soo socda! In kasta oo masiibada ay nolosheena ku badashay ku dhowaad dhinac walba, #Iyadoo Ragga Hindida ahi is dhiibin oo sii wadaan inay ku noolaadaan xad-dhaafka, haa, c